Uhlalutyo lwekhamera ye-ANNKE 1080P, ukubekwa kweliso ngaphakathi komntu wonke | I-Androidsis
Uqwalaselo lwekhamera ye-ANNKE 1080P
URafa Rodríguez Ballesteros | | Ezinye izixhobo, Reviews
Namhlanje sikuzisa isixhobo ukuba kunye ne-smartphone yethu inokusinceda senze ikhaya lethu likhuseleke ngakumbi. Inye Ikhamera enonxibelelwano lwe-IP Isenokuba sisixhobo osifunayo ukuze ukwazi ukuzola xa ushiya ikhaya.
Kude kube kutshanje, ukuba nenkqubo elungileyo yokhuseleko kuxabisa imali eninzi. Kodwa enkosi kwizinto ezifana nazo Ikhamera ye-ANNKE 1080P oku kutshintshile kwaba ngcono. Kwaye phantse nawuphi na umsebenzisi anganakho ukuhlawula enye yazo encinci.
1 I-ANNKE 1080P ikhamera enye ukuyilawula yonke
3 Imbonakalo enomtsalane kwaye icoceke kakhulu
4 Itekhnoloji ye-ANNKE 1080P, ukhuseleko kunye
4.1 Imemori yokolula ukugcinwa kunye nokukhethwa kokugcina
5 Ukucaciswa kobugcisa kwe-ANNKE 1080P
6 Iinkonzo kunye neengozi ze-ANNKE 1080P
I-ANNKE 1080P ikhamera enye ukuyilawula yonke
Iikhamera zokujonga i-IP namhlanje Isixhobo esingaphezulu kwesiluncedo kwiindawo ezininzi. Ngoxhumo lwe-intanethi kunye ne-ANNKE 1080P sinako ukulawula ukuba ngubani ongena ashiye indlu yethu. Kodwa sinokulawula ukungena kwishishini, okanye ubone ngexesha elifanelekileyo ukuba umntwana wethu uphilile.
I-yevance enikezelwa yitekhnoloji kwicandelo lokurekhodwa komfanekiso, okanye usasazo ngqo lwento eyenzekayo, ikwazile ukwenza ubomi bube lula kuthi. Kwaye ngoku nge-ANNKE 1080P kulula kunokuba singasebenzisa obu buchwephesha ngexabiso elifikelelekayo nayiphi na ipokotho. Apha ungathenga ikhamera ye-ANNKE 1080P ngexabiso elingaphantsi kwe-50 euro.
Kuya kufuneka ujonge ngaphakathi kwebhokisi kwaye ndikuxelele zonke izinto esizifumana ngaphakathi. Ukongeza kwikhamera yethu kukho izinto ezininzi ezihamba nayo. Kwaye into elungileyo malunga noku kukuba izincedisi eziluncedo ezisebenzisela ukwenza ukusetyenziswa kwayo kube lula ngakumbi.
Sine ukutshaja kunye nokudibanisa intambo, ngefomathi Micro USB. Inobude obaneleyo ukuze ifikelele kwishelufa ephezulu ngaphandle kwengxaki. Sikwafumene i intambo yenethiwekhi ukuze ukwazi ukudibanisa ikhamera ngqo kwi-router yethu. Ngale ndlela siqinisekisa unxibelelwano oluzinzileyo noluthembekileyo ukuba uqhagamshelo lweWi-Fi alulunganga.
Sinefayile ye- isibiyeli ukuxhoma ikhamera eludongeni okanye eluphahleni. Singayimisa ikhamera ngaphandle kweengxaki ngokujika nje okumbalwa kumsonto. Kwaye ngenkxaso sinazo nezikrufu eziyimfuneko ukuyilungisa.
Imbonakalo enomtsalane kwaye icoceke kakhulu
Ukujonga imeko ebonakalayo yale khamera sibona ukuba injani icandelo loyilo alihoywanga. Yakhelwe ngaphakathi iplastiki emhlophe igqityiwe kwiluhlu esemgangathweni elungileyo kunye nokumelana. Ngokuhambelana kakhulu nemigca yoyilo lwetekhnoloji kule minyaka idlulileyo.
Umzimba wenziwe ngamacandelo amabini, elinye ngaphezulu kwelinye. Kwisiseko, enemilo ethe tyaba ngakumbi, ngasemva kwayo zezi unxibelelwano namazibuko. Sinezibuko Unxibelelwano lwentambo ye-intanethi ngqo. Nangona ayizukufuneka njengoko i-ANNKE 1080P ixhotywe ngonxibelelwano lwe-Wi-Fi.
El Ukutshaja kwefomathi encinci ye-USB kunye nonxibelelwano lwezibuko. Sikwafumene i setha kwakhona iqhosha ukucima useto olucwangcisiweyo. Kwaye into ebonakala ngathi iyimpumelelo kuthi ukuba into esiyifunayo kukufumana urekhodo, Imemori encinci yememori khadi ye-Micro SD. Rekhoda yonke into ekungqongileyo ngaphandle koloyiko, thenga ikhamera ye-ANNKE 1080P ngoku eAmazon ngexabiso elihle.
Kwindawo esisigxina yesiseko kukho izinto ezimbini ezenza i-ANNKE 1080P ikhamera esebenzayo ngokupheleleyo. Inkqubo ye- imakrofoni kunye nesithethi Enkosi apho sinokunxibelelana sisuka kwi-smartphone naye nabani na ophambi kwekhamera yethu. Okanye ukhale ialam ukuvimba iindwendwe ezingafunekiyo.
Ngaphezulu ikhamera ngokwayo. Ilele ngaphakathi kwinqanaba apho Iipivots kwisiseko esinokujikeleza okungaphezulu kweedigri ezili-180. Kwaye iyahamba isihla inyuka kumgca omnye ngaphezulu kweedigri ezili-180.
Ngale ndlela yokujika, kwaye ibekwe ngokufanelekileyo akufuneki sibe nangxaki yokugubungela igumbi okanye indawo ngokupheleleyo. Ukongeza, enkosi kwitekhnoloji enayo kunye nayo umbono wasebusuku Akukho nto iya kusinda kulawulo lwalomkhosi ubalaseleyo.
Itekhnoloji ye-ANNKE 1080P, ukudibanisa ukhuseleko
Ukongeza ekubeni ikhamera yeenjongo ezininzi enikezela ngezixhobo ezahlukeneyo. Kwinxalenye enkulu enkosi ngezibonelelo kunye namathuba anokuthi abonelele. Itekhnoloji eyixhobisayo iyenza isixhobo esinamandla esibonelela ngokhuseleko olongezelelweyo sonke sijonge kwizixhobo ezikolu luhlu.
Akhawunti Ukurekhodwa kwe-HD ekumgangatho ophezulu ngesisombululo se-pixel esingu-1080. Ayizizo zonke iikhamera zokujonga ezinokuziqhayisa ngokuba nazo Iimpawu ze-infrared ze-crisp yasebusuku yokurekhoda. Nokuba kukhanyisiwe, i-ANNKE 1080P yethu iya kurekhoda yonke into edlula phambi kwelensi yakho.
Enye yezinto ezisebenzayo zayo ibonakala ngenxa yenoveli yayo kunye namathuba ekunikezelayo. Enkosi kwizenzi zeshukumisi ezinazo, sinokuyenza isebenze imowudi yokulandela umkhondo ekrelekrele ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela, ikhamera iya kusebenza xa kudlula umntu kwaye izakulandela ngokuzenzekelayo ngawo onke amaxesha. Sinokudibanisa kunye ne-alamu ukuba sinokufumaneka.
Thenga ikhamera yakho ye-ANNKE 1080P apha kwiAmazon nazo zonke iziqinisekiso.
Imemori yokolula ukugcinwa kunye nokukhethwa kokugcina
Enye yokongezwa kwayo yile Iimpawu zokurekhoda kwinqanaba elincinci. Ngaloo ndlela ixesha lokurekhoda elifumanekayo landisiwe ngokubonakalayo. Ugcino olukhulu lokonga imemori khadi. Ngale nkqubo unokurekhoda ukuya kuthi ga kwiveki epheleleyo enememori khadi esezantsi njenge-64GB.
Kwaye ukuba i-64 GB yememori khadi ayinakwanela, I-ANNKE ikwabonelela ngamathuba okugcina urekhodo lwethu kwilifu. Inkonzo ehlawulelweyo esinokuyizama simahla kangangeentsuku ezingama-30. Utyalomali oluncinci olunokuqinisekisa ingqokelela elungileyo yemifanekiso erekhodiweyo kwimeko yomonakalo okanye ilahleko yekhadi le-Micro SD.
La Ukuhambelana kwe-Alexa Kwakhona kusebenza ukufumana amanqaku. Ifakwe ngokufanelekileyo kuthungelwano lwethu lwezixhobo zonxibelelwano, singayisebenzisa kwaye sifikelele kuseto lwayo ngokunika imiyalelo yelizwi elula. Ukukhululeka ngakumbi kolawulo nokuphatha akunakwenzeka.
Ukucaciswa kobugcisa kwe-ANNKE 1080P
Ukurekhoda I-1080P HD
Umbono wasebusuku SI
Imemori yangaphakathi Hayi
Ubukhulu 7.1 x 6.5 x 4.2 intshi
Ixabiso 45.18 €
Ikhonkco lokuthenga Ikhamera ye-ANNKE 1080P
Iinkonzo kunye neengozi ze-ANNKE 1080P
La inkcazo ephezulu yombono ebusuku Inika imisebenzi eyongezelelweyo.
La iteknoloji yokulandelela ngokuzenzekelayo sisixhobo esiluncedo kakhulu ekujongeni.
Qhubeka ialam ebangelwa yintshukumo yoluvo kusenza sizive sikhuselekile.
La Ukuhambelana kwe-Alexa yenza ukuba isebenzisane ngakumbi kwaye isebenziseke lula.
Umbono wobusuku obulungileyo
Itekhnoloji yokuKhangela ukuKhangela ngokuBonakalayo
Ishukumisi senzwa yokuhamba
Ayinayo imemori yangaphakathi ukugcina imifanekiso.
Akukho bhetri, ke siyakuhlala sidinga intambo yombane.
Ayinayo imemori yangaphakathi
Isiqulatho se-ANNKE 1080P
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uqwalaselo lwekhamera ye-ANNKE 1080P
Imowudi emnyama ye-Twitter ye-Android ilibazisekile
UXiaomi wazisa utshintsho lokufihla iintengiso kwi-MIUI